Kal fadhiigii 2aad ee Jaaliyada Deeganka Somalida Itoobiya ee Norway oo ka dhacay Oslo. – Rasaasa News
Oct 19, 2011 Kal fadhiigii 2aad ee Jaaliyada Deeganka Somalida Itoobiya ee Norway oo ka dhacay Oslo.
Waxaa taariikhdu markay ahayd 15.10.2011 ka dhacay magaalada Oslo ee dalka Norway kal fadhigii 2aad ee jaaliyada ka soo jeeda Ismaamulka Deegaanka Somalida Ethiopia, oo sanakii hore lagu dhisay isla magaalada Oslo.
Shirkan oo qaban qaabadiisu mudo socotay isuguna ayna isugu yimaadeen xubnaha jaaliyadu, ayaa waxaa laggaga hadlay arimo badan oo ay ka mid yahiin kuwa hoos ku xusan:
a) Qiimayn lagu sameeyay wax-qabadkii jaaliyada mudadii sannadka ahayd ee ay jirtay.
b) Qorshaynta hanaanka waxa qabad ee jaaliyada sanadkan fooda inagu soo haya.
c) Wax ka badal lagu sameeyay hab-dhismeedka gudiga fulinta jaaliyada.
Furitaankii kulanka waxaa lagu bilaabay aayado quraan ah, ka dib waxaa la guda galay dood ku saabsan sadexda qodob ee kor ku xusan. Gudoomiyaha jaaliyada DSI Mudane Cabdirisaaq Khaliif (Guhaad),ayaa ugu hoaynba warbixin muhiim ah madasha ka jeediyay, kuna dheeraaday habkii ay u dhacday soo dhawayntii ra’isal-wasaaraha dalka Ethiopia oo dhawaan booqasho ku yimid boqortooyada Norway, isla markaana talaabo ku dayasho mudan ku tilamaamay habka casriga ah ee xubnaha jaaliyadu isu abaabuleen.
Gudoomiyaha ayaa ku amaanay jaaliyada codsiga ay ra’isal wasaaraha u gudbisay, kaas oo ku saabsanaa fur-furida ganacsiga iyo u sahlida qurba-joogta deegaanka u dhalatay waxyaabaha la xidhiidha ganacsiga iyo maal gashiga dhulkooda.
Waxaa sidoo kale warbixin ka soo jeediyay kulanka mudane Yuusuf oo jaaliyada Norway u matalayay soo dhawayntii ra’iisal wasaaraha ee Denmark.
Dhanka kale Gudoomiyaha ururka dhalinyarada mudane Xiis, ayaa isaguna dhinaciisa warbixin dheer oo ku saabsan wax qabadkii ururka dhalinyarada ee sannadkii la soo dhaafay ka soo jeediyay madasha.
Hadaba wada tashi iyo falanqayn dheer ka dib waxaa dib u habayn lagu sameeyay qaab dhismeedka maamulka jaaliyada, iyada oo laga dab qaatay khibrada halkii sano ee uu maamulku jiray, waxaana loo magacaabay xubno cusub.
Xubnaha cusub ee loo magacaabay wadida hawlaha Jaaliyadda
degaanka Somalida Ethiopia ee dalka Norway ayaa kala ah;
1. Cabdirisaaq Khalif Guhaad [Guddoomiye]
2. Deeq Cabdi Yare [Gudoomiye xigeen]
3. Yuusuf Ismaaciil Adam [xoghaye]
4. Cabdirashiid Cali Shucaac [Afhayeenka xidhiidhka guud]
5. Cabdinuur Xusseen Cilmi (Isdhariijiye) [Arimaha bulshada, abaabulka iyo wacyi galinta]
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ayaa mar labaad loo doortay mudane Xiis oo la isku raacay in isaga iyo maamulkiisuba hawl muhiim ah qabteen.
Waxaa xusid mudan in xubin ka mid ahaa gudigii hore lagu canaantay xil gudasho la,aan iyo karti daro.
Hawl wadeenada ayaa guda galay shaqadooda isla maalintii xilka loo dhiibay.
Afhayeenka iyo Xidhiidhiyaha Guud ee Jaaliyada.
Cabdirashiid Cali Shucaac
Wargaysyada Sweden oo Aan Waxba Ula Hadhin Ethiopia